ချည်ဖြူ ဖွဲ့မင်္ဂလာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ သည် ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ဝါခေါင်လအတွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ကြသော ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ ရိုးရာဓလေ့သည် ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဘိုးဘွား အမွေအနှစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၃ ပါဝင်သော အသုံးအဆောင်များ
ချည်ဖြူဖွဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာ လက်ကို ချည်ဖြူဖြင့် ဖွဲ့နှောင်ရစ်ပတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနား၌ လက်ကောက်ဝတ်ကို ချည်ဖြူဖြင့် ဖွဲ့နှောင်ရစ်ပတ်ရခြင်း အကြောင်းမှာ ရှေးလူကြီးများ၏ ပြောဆိုချက်အရ ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့သည် တိဗက်-တရုတ်ဒေသတို့တွင် စတင်နေထိုင်ရာမှ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကို ရှာဖွေနေထိုင်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာရာတွင် မြောက်ဘက်အရပ်မှ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုလူစုကို "ဖူ့ထော်မဲပါ"ဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်၍ ထွက်ခွါလာခဲ့ကြသည်။ မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ ဝင်လာမည်ပြုသောအခါ လူစုခွဲပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ နေရာကောင်းများကို ရွေးချယ်ပြီး သွားရောက်နေထိုင်ကြရန် လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များက တညီတညွှတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် အုပ်စုအလိုက် လူစုမခွဲကြမီ မိမိတို့လူမျိုးအချင်းချင်း နောင်တွင် တွေ့ဆုံကြသောအခါ မမေ့မပျောက်ကြဘဲ မှတ်မိနိုင်ကြရလေအောင် တစ်စုံတစ်ခုသော အမှတ်အသားကို ပြုလုပ်ထားသင့်ကြောင်း တိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။ တဖန် မိမိတို့ လူမျိုးစုများ တောင်အရပ်ဆီသို့ ဦးတည်သွားကြသောအခါ မိမိတို့ သွားရောက်မည့် အရပ်ဒေသ အကြောင်းကို အတိအကျ မသိရ၊ မကောင်းဆိုးဝါး စသည်များသည် လူယောင်ဆောင်ကာ မိမိတို့ အုပ်စုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးကြမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကရင်လူမျိုးစုများအတွင်းသို့ အကယ်၍ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ကြလျှင် အချင်းချင်း လူမမှားဘဲ မှတ်မိနိုင်ရလေအောင် လက်တွင် ချည်ဖြူဖွဲ့ပြီး အမှတ်အသား ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု အချင်းချင်း အကြံပေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့ မြန်မာပြည်ရှိရာ တောင်အရပ်ဆီသို့ လူစုခွဲပြီး မဝင်ရောက်မှီ ခေါင်းဆောင်လူကြီးသူမများက မိမိတို့ လက်အောက်ငယ်သားများအား လက်ကောက်ဝတ်တွင် ချည်ဖြူဖြင့် ဖွဲ့နှောင်ပေးလိုက်ကာ ဆုတောင်းပထာနာ ပြုပေးခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကို အစွဲပြုပြီး ယခုအခါတိုင်အောင် ကရင်တို့ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာကို ပြုလုပ်လာခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာနှင့် ပတ်သက်၍ စပ်ဆိုထားခဲ့သည့် ကဗျာလင်္ကာမှာ---
အဓိပ္ပါယ်မှာ- "အသက်ဝိညာဉ်သည် ဤလက်ကောက်ဝတ်တွင် ဖွဲ့ချည်ထားသော ချည်ဖြူ၌ တည်ရှိနေပါစေ။ ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်နှင့်မကွာ တည်ရှိနေပြီး ဤချည်ဖြူသည်သာ အသိသက်သေ ဖြစ်ပါစေသတည်း"ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကရင်အမျိုးသားတို့သည် ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် ဝါခေါင်လရောက်လေတိုင်း ကျင်းပကြသည်။ တစ်အိမ်ထောင်စုချင်းလည်း လုပ်သည်။ ဆွေမျိုးလိုက်လည်း လုပ်သည်။ ကျေးရွာအုပ်စုလိုက်လည်း လုပ်သည်။ ၎င်းပွဲတော် အခမ်းအနားကို အခြားသော ကာလတွင် ပြုလုပ်လေ့မရှိဘဲ ဝါခေါင်လတွင်မှ ပြုလုပ်ကြသည်မှာ အကြောင်းထူးရှိပေသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့စွာ ပြုလုပ်ခြင်းတော့ မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝါခေါင်လတွင် မိုးများသောကာလဖြစ်၍ အအေးလည်းပိုသည်။ ရောဂါများလည်း ဖိစီးလွယ်သည်။ ထိုလ၌ ကလေးသူငယ်များ နာမကျန်းများစွာ ဖြစ်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းမှာ မိမိတို့ ကလေးသူငယ်များ၏ လိပ်ပြာဝိညာဉ်များသည် ကာယကံရှင်၌ မကပ်နေဘဲ လွင့်ပါးသွားသည့်အခါ ပြင်ပမှ မကောင်းဆိုးဝါးများ၏ လိပ်ပြာဝိညာဉ်များ ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြီး မှီခိုစားသောက်ခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် လိပ်ပြာဝိညာဉ် စုံလင်သော ဝါခေါင်လ၌ မိမိတို့ ကလေးသူငယ်များ၏ လိပ်ပြာဝိညာဉ်များ ပြန်လည်ပူးကပ် ရောက်ရှိစေရန် လိပ်ပြာခေါ်သည့်အနေဖြင့် လက်ကောက်ဝတ်တွင် ချည်ဖြူဖွဲ့ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဝါခေါင်လရောက်တိုင်း ချည်ဖြူဖွဲ့ပေးခြင်းဖြင့် လွင့်ပါးနေသောစိတ်များ တည်ငြိမ်မှုရှိလာအောင် သူတစ်ပါးတို့၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင်နှင့် ကျန်းမာရေးသုခ ပြည့်စုံပြီး စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ဝါခေါင်လ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာပွဲတွင် ပါဝင်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း (၇)မျိုးမှာ---
ငှက်ပျောသီးသည် အခိုင်လိုက် အဖီးလိုက်တွဲ၍ သီးသော အသီးဖြစ်သည်။ ငှက်ပျောသီးကို အရှေ့ပိုးကရင် ဘာသာဖြင့် "သာကွီသား"ဟုခေါ်ပြီး "သာကွီ"ဆိုသည်မှာ စိတ်ထားဖြူစင်ခြင်း၊ နှစ်နှစ်ကာကာ သံယောဇဉ်ရှိခြင်းသဘောကို ဆောင်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကရင်လူမျိုးများသည် ငှက်ပျောသီးကဲ့သို့ တစ်ဖီးတည်း တစ်ခိုင်တည်း စုစုစည်းစည်း ညီညီညာညာဖြင့် ဥမကွဲ သိုက်မပျက် နေထိုင်ကြသည့် သဘောဖြစ်သည်။
ကောက်ညှင်းထုပ်သည် စေးကပ်နေသည့် သဘောရှိပြီး တော်ရုံနှင့် ခွါ၍ မရပေ။ ထို့ကြောင့် ကရင်လူမျိုးများသည်လည်း ဥမကွဲ သိုက်မပျက် နေထိုင်ကြသည့် သဘောဖြစ်သည်။
ထမင်းဆုပ်ကို ကရင်အခေါ်အားဖြင့် "မင်ထုံဒူး"ဟု ခေါ်ဆိုပြီး "မင်"ဆိုသည်မှာ ထမင်း၊ "ထုံဒူး"ဆိုသည်မှာ ဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြသည်ဟု အတိတ်နိမိတ် ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားအင်ရှိရန် ထမင်းကို နေ့စဉ် စားသုံးကြရပါသည်။ ထမင်းစားရမှ အားရှိပါမည်။ အားရှိမှ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါမည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကရင်လူမျိုးများအချင်းချင်း ထမင်းခွံ့ကျွေးကြပါစို့ ဟူသော သဘောဖြစ်သည်။
နတ်ပန်းညိုကို ကရင်ဘာသာဖြင့်"ဖော့ဝီး"ဟု ခေါ်ပြီး ၎င်းပန်း၏ အမြစ်များသည် ဆက်နွယ်ကာ တစ်အုံတစ်ခိုင် ရှိသည့်အပြင် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပေါက်ရောက်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်များ ရာသီဥတု အန္တရာယ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အပင်သည် ဆွေးမြေ့သွားသော်လည်း အချိန်တန်လျှင် အမြစ်မှ ပြန်ပေါက်တတ်သည့်သဘောကို ဆောင်သည်။ နတ်ပန်းညိုအပင်သည် မိမိအပင် ရှင်သန်ကြီးထွားရေးအတွက် အမြစ်သည် ကျယ်ပြန့်ရှည်လျားစွာ ထိုးဆင်းပြီး ရောက်လေရာမှာ အပင် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပေါက်သဖြင့် တော်ရုံနှင့် သတ်၍လည်း မသေနိုင် မျိုးပြုတ်၍ မျိုးမသုဉ်းနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ကျွနု်ပ်တို့ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး ဤနတ်ပန်းညိုကို စံပြ၍ အမြတ်တနိုး အလေးထားကာ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ချည်ဖြူသည် ဖြူစင်သန့်ရှင်းသော သဘောကို ဆောင်သည်။ ကရင်လူမျိုးမှန်လျှင် လက်ကောက်ဝတ်တွင် ချည်ဖြူအမှတ်အသား ပါရှိရမည်ဟု ရှေးအစဉ်အဆက်က မှတ်သားလာခဲ့ကြသည်။ ချည်ဖြူမျှင်တစ်မျှင်ကို ပြတ်အောင်ဆွဲနိုင်သော်လည်း ချည်ဖြူများစုစည်း၍ ဖွဲ့ချည်ထုံးနှောင်သောအခါတွင် ဆွဲဖြတ်သော်လည်း မပြတ်နိုင်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကရင်လူမျိုးအချင်းချင်းသည်လည်း ချည်ဖြူများပမာ စုစည်းခိုင်မာရမည့်သဘောကို ဆောင်သည်။
ရေသည် လူသားများအတွက် မရှိမဖြစ်သော အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ အတိတ်နိမိတ် ယူကြသည်။ ရေသည် အေးမြနေသကဲ့သို့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဘဝခရီးလမ်းသည်လည်း ရေကဲ့သို့ အေးမြကြည်လင်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်။
ကြံပိုင်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကြံတို့မည်သည် အဆစ်တိုင်းတွင် အပင်ပေါက် မျိုးဆက်ပျံ့သည့် သဘောကို ဆောင်သည်နှင့်အညီ အမျိုးအနွယ် တွယ်တာစောင့်ထိန်းသော သဘောကို ဆောင်သည်။ ထို့ပြင် ကြံသည် ချိုသောအရာသာ ရှိသောကြောင့် ချိုသာဖြူစင်သော သဘောကို ဆောင်သည်။ ကြံပင်သည် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တစ်ဆစ်ပြီးတစ်ဆစ် အထက်သို့ ထိုးတက်နေလျက်ရှိရာ ကျွန်ုပ်တို့ ကရင်လူမျိုးများသည်လည်း ကြံပင်ကို ပမာပြုကာ ရှေးဆက် ဘဝ တိုးတက်စည်ကားရေး ကြိုးစားရမည့်သဘော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်။
နှစ်စဉ် ဝါခေါင်လတွင် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ အချိန်တွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးကို "ပြူးလာ-ပြူးလာ"ဟူ၍ အစချီကာ "စုပေါင်းညီညာစွာ မိမိတို့ ဘိုးဘွားမိဘတို့၏ ချစ်ခင်ကြင်နာလှသော မေတ္တာတရား အရိပ်အောက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ"ဟူ၍ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းကြပေသည်။
↑ မန်းနဲစန်(ဘားအံ)၏ ကရင့်ရိုးရာ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ
↑ မန်းနဲဝ (၂၀၀၆). "ဝါခေါင်လ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ". ပိုးကရင်မဂ္ဂဇင်း.
↑ မန်းလင်းမြတ်ကျော်၏ ကရင်အမျိုးသား လက်ရစ်ချည် လိပ်ပြာခေါ်ခြင်း ရိုးရာဓလေ့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချည်ဖြူ_ဖွဲ့မင်္ဂလာ&oldid=424280" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၁:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။